Showing १११-१२० of १७२ items.
धरान / गण्डकी प्रदेशको गहना पोखरा एउटा पर्यटकीय शहर हो । विसं २०५२ माघ १८ गते उपमहानगरपालिका घोषित पोखरालाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विसं २०७३ फाल्गुन २७ गते महानगरपालिका घोषणा गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिका पोखरा उपत्यकामा अवस्थित नेपालको अत्यन्तै रमणीय स्थान हो । फेवा ताल, महेन्द्र गुफा, पातले छाँगो, सराङकोट, स्तुम्पा, चमेरे गुफा, सेती नदि, गोर्खा संग्रालय पोखराका गहना हुन । देश अनि बिदेशबाट हजारौं पर्यटक पोखरा भ्रमण गर्न आउने गर्दछन् । विशेष गरेर लेक साइट पर्यटकीय क्षेत्र घोषण गरिएको छ । यहाँ २४सैं घण्टा बजार खुल्ला रहन्छ । विदेशी पर्यटकहरुको चहलपहन यहाँ बढि हुन्छ । य
नेपालको उत्कृष्ट पदमार्ग अन्नपूर्ण बेस क्याम्प (फोटो फिचर)
नेपालमा सबैभन्दा धेरै पद यात्रा गरिने स्थान हो अन्नपूर्ण पद यात्रा । अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको यात्रा नेपालको सुन्दर शहर पोखराबाट शुरु हुन्छ । पोखराबाट मट्टी भन्ने स्थानसम्म गाडी जान्छ । त्यहाबाट पैदल हिड्नु पर्छ । सामान्यतया तीन दिनमा बेस क्याम्प पुगिन्छ । पदयात्राको क्रममा माछापुच्छे्र, धौलागिरी, अन्नपूर्ण रेन्जको मनोरम दुष्य पुनहिलबाट देख्न सकिन्छ । पुनहिलबाट सूर्य उदाएको र अस्ताएको दृष्य देख्न सकिन्छ । बाटोमा ठाउँ ठाउँमा बस्ने तथा खानेको व्यवस्था गरिएको छ । गुरुङ, मगर र थकाली संस्कृति यहाँ पाइन्छ । धान्द्रुकमा होम स्टे र गुरुङको संग्रायल छ । यसले धेरैको मन लोभ्याएको छ । बढि विदेशी पर्यटकहर
तस्बिरः रीता युङ्साहाङ्
धरान / रुपन्देही जिल्लामा पर्ने लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल हो । बुद्धको जन्म र मृत्यु कहिले भयो भनी यकिनका साथ भन्न नसकिए पनि बिसौं शताब्दिका धेरैजसो इतिहासकारहरू उनको जीवनकाल ५६३ ईशापूर्व देखि ४८३ ईशापूर्व रहेको भन्ने कुरामा एकमत देखिन्छन् । रानी मायादेवी आफ्नो माइत देवदह जाने क्रममा बाटोमा पर्ने लुम्बिनी भन्ने ठाउँमा पुग्दा प्रसव व्यथाले भेटेपछि आरामका लागि बसिन् । त्यहीँ उनलाई पुष्करिणी सरोवरको किनारमा एउटा रुखको फेदमा सुस्ताउँदै गर्दा बालक सिद्धार्थको जन्म भएको बताइन्छ । उनले आफ्नो जीवनकालको पहिलो २९ वर्ष राजसी सुखमा बिताए । तर पनि उनी सदा संसारमा व्याप्त दुःखको कारण र त
पाडाे किन्दा भैसी उपहार
बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोडमा होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनरत विधार्थीहरुले विश्व पर्यटन दिवस मनाएका छन् । सुरुवाती कोठा नेपालको आयोजनामा पर्यटन दिवसको अवसर पारी बिर्तामोडमा प्रभातफेरी र कोणसभा सम्पन्न गरिएको छ । पर्यटन वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रभातफेरीमा विभिन्न प्ले कार्ड सहित विधार्थी सहभागी भएका थिए । बिर्तामोडमा होटल म्यानेजमेन्ट पढाई हुने कलेजहरु इकोम, आदर्श स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट र स्प्रिङडेलका विधार्थीहरु सहभागी भएका थिए । झाँकी सहित सहभागीहरुले विर्तामोड परिक्रमा गरी कोणसभा गरेका थिए । सो कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुव कुमार शिवाको
घर घर मै सेवा
यि सुनसरीकाे बराहक्षेत्र नगरपालिकास्थित बाङ्गेका पुस्कर परियार हुन । उनी गाउँघरका बंगुर फार्मबाट बंगुरका पाठा साइकलमा धरान ल्याई विक्रि गर्ने उनको पेसा छ । बाँसको चोयाले बनाएको खुगीमा बंगुरका पाठा हालेर धरानभरी डुलाएर बेच्ने गर्छन । एक जोडी पाठाको ७ हजारसम्ममा विक्रि हुन्छ । दिनमा दुई जोडीसम्म विक्रि हुने गरेको उनले बताए । उनीहरु घाममा पसिना पुछ्दैं साइकल डो¥याउछन् । साइकलको घण्टी बजार ‘बंगुरका सप्रेका पाठा आए’ भनेर सूचना पनि गर्छन् ।
धरान / धरानदेखि पुर्वी उत्तरमा रहेको अग्लो डाँडा जसलाई दानाबारी भनिन्छ । यसको उचाई झण्डै १५ सय छ । नजिकै हर्दिया छ । धरानमा आउने बेसार, अदुवा, अमलिसोलगायत आग्र्यानिक तरकारी यही स्थानबाट आयत भएका हुन । दानाबारीको छुट्टै डाँडा, जसलाई स्थानीयले गढी थुम्का भन्छन् । त्यहाँ सिंहदेवी थान छ । यो धरानको समग्र बजार दृष्यालोकन गर्ने स्थान पनि हो । तराईका सुन्दर फाट, धरानलाई निहाल्न यहाँसम्मको यात्रा गर्न धरान बजारदेखि १० किमीको दुरी तय गर्नु पर्दछ । यसको पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । १ करोड बजेटमा बाटो निर्माण कार्य भइरहेको छ । दानाबारीको डाँडामा ढेड करोड लगानीमा भ्यु टावरसमेत न
२,१६७ पटक पढिएको
धरान / धरानमा चारदिनसम्म चल्ने इष्ट टुइरिजम मार्टको आज साँझ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका छन् । नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई पोष्टर र बोर्डमा मात्र सिमित नवर्नाइ आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर प्रदेश १ सरकार अघि बढेको बताएका छन् । उनले पूर्व आउने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरुको सहजताका लागि विराटनगरको हवाई मैदानको स्तरोन्नतीको काम थालिएको जनाए । यस्तै विराटनगरदेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्मको स्थल मार्ग निर्माणको कामसमेत अघि बढेको मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए । उनले हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको १ नं. प्रदेशमा भएका उत्पादनहरुलाई ब्राण्डिङ गर्न शुरु भएको बताएका थिए । नेपाल पर्यटन बोर्ड
सिरहा / रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम नजिकै खाल्डो खुल्डीको पानीमा डुबेर ३ जनाको मृत्यु भएको दुर्घटना सेलाएको छैन । बकैया नदीको डुंगाको यात्रा झनै डरलाग्दो छ । गौर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित टिकुलिया घाटमा चलिरहेको डुंगामा सवारी यात्रुको संख्या र वारपार गरिने बाइक र अन्य वस्तुको तौल ३० क्विन्टल भन्दा कम थिएन् । एउटा ढुंगामा १५ जनासम्म सवार हुन सक्ने क्षमता हो । तर त्यहाँ चौगुना यात्रुहरु आफ्नो गन्तव्यमा जान तछाड मछाड गरिरहेको पाइन्छ । गौर नगरपालिका र इशनाथ नगरपालिकाले ढुंगा सवारका लागि पनि लाइफ ज्याकेट वितरण त ग¥यो तर त्यो व्यक्तिले घर लगे पछि यात्रा गर्ने बेलामा नपाइएको ढुंगा चालक पप्पु क
बुटवल / रूपन्देही जिल्लाको एक मात्र उपमहानगरपालिका बुटवल हो । यो शहर तिनाउ अथवा तिलोत्तमा नदिको किनारमा अवस्थित रहेको छ । बुटवलको २२ किमि दक्षिणमा भैरहवा शहर रहेको छ । यो नगर पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ । यो नगर महेन्द्र राजमार्ग तथा सिद्दार्थ राजमार्ग द्वारा नेपालको पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण जोडीएको छ । यातायातको सुविधा तथा भौगोलिक अवस्थितिको कारणले बुटवल पश्चिम नेपालको एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास भैरहेको छ । एक लाखको हाराहरी जनसङ्ख्या रहेको बुटवल द्रुतगतीमा बिस्तारीत भइरहेको छ । यातायातको केन्द्र रहेको बुटवलमा आधुनिक बसपार्कसमेत रहेको छ । भौतिक पूर्वाध
१,१३१ पटक पढिएको